उनले ५ रुपैयाँका साथमा तेल ल्याउन एउटा कचौरी पनि दिइछिन् ।
केपी ओलीलाई पत्र
श्री खड्ग बाबु, आज तपाईंलाई एउटा सानो कथा सुनाउन मन लाग्यो । धेरै पहिले एउटी गृहस्थ नारीले झक्कडसिं नाम गरेका आफ्ना पतिलाई तेल किनेर ल्याउन अराइछिन् । उनले ५ रुपैयाँका साथमा तेल ल्याउन एउटा कचौरी पनि दिइछिन् । झक्कड पैसा र कचौरी लिएर तेल किन्न बजार गए । उनले पसलेसित ५ रुपैयाँको तेल मागे, तर कचौरीमा सबै तेल अटेन ।
बाँकी केमा राख्ने त भन्दा उनले कचौरीको बैठक खाली देखे । त्यसपछि तेल भरिएको कचौरी उल्ट्याएर उनले त्यसको बैठकमा बाँकी तेल थापे । उनको यो कार्य देख्दा साहु मुसुमुसु हाँसिरहे मात्र, केही भनेनन् ।
घर पुगेपछि उनले श्रीमतीलाई तेल दिए । उनकी पत्नीले ५ रुपैयाँको तेल यत्ति हो त भनेर सोधिछिन् ।
लाटी उतापट्टि हेर् न भन्दै उनले कचौरी उल्ट्याउँदा आखिरमा कचौरीको बाँकी तेल पनि पोखियो । त्यस्तै तपाईंले पनि ४० प्रतिशत स्थान अर्कालाई दिनुभयो ।
सयमा ४० त तपाईंले पहिल्यै हारिसक्नुभयो । बाँकी साठीमा पनि के सबैले तपाईंलाई नै दिन्छन् त ? अरूले पनि अलिअलि त पक्कै लैजालान् । अनि तपाईंको दुईतिहाइ बहुमत कसरी पुग्छ ? के आकाशबाट खस्ला त ?
देवेन्द्र खनियाँ, पासिकोट, काठमाडौं
सबैले विरोध गरौँ
१४ मंसिरको नयाँ पत्रिकामा ‘उत्तर कोरियाली नयाँ क्षेप्यास्त्रको क्षमता’ शीर्षकको बिबिसीको टिप्पणी पढेँ । जब स्यालको मृत्यु आउँछ, तब त्यो सहरतिर पस्ने गर्छ भनिन्छ । उत्तर कोरियाले पनि अमेरिकातिर निसाना साँधेर त्यही स्यालको कथालाई चरितार्थ गर्न खोजेको छ ।
आफ्ना जनताको जीवनस्तर उकास्नुको सट्टा उसले क्षेप्यास्त्रको खेती गर्दै छ । यस्तो कार्यले उसलाई त फाइदा गर्दैन नै, साथसाथै विश्वशान्तिमै पनि गम्भीर खलल पार्ने देखिन्छ । त्यसैले उत्तर कोरियाको यस्तो हर्कतविरुद्ध हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।
-डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज
सभ्य भई प्रचार गरौँ
हिजोआज एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका भाषण सुन्दा लाग्छ, उनले राजनीतिमा संसारै जितेर आएका छन् । निर्वाचनका लागि भएको वाम एकताबाटै यसरी उम्लिएका ओली निर्वाचनपछि पार्टी एकता नै भयो भने कति उम्लेलान् ?
प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उखानटुक्कामै चलेका उनी आफ्नो भाषणमा मर्यादित भाषा कमै प्रयोग गर्छन् । झन् यतिखेर उनलाई कहाँ के बोल्नुहुन्छ र कहाँ के बोल्नु हुँदैन भन्ने चासोसमेत हुन छाडेको देखिन्छ । देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका र एउटा जिम्मेवार पार्टीका अध्यक्षले यसरी हलुका भई भाषण गरेर आफ्नै उचाइ घटाउनु हुँदैन ।
पाएका वेला अरूलाई नांगेझार पार्ने उनको शैलीले भोलि आफैँलाई फाइदा पुर्‍याउला कि नपुर्‍याउला, त्यसको ख्याल गरेको पाइँदैन । अरूतर्फ एक औँला उठाउँदा आफूतिर तीन औँला फर्केका हुन्छन् भन्ने सबैले अरूमाथि औँला ठड्याउनुअघि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।
उनले जसरी नै अरू नेताले पनि जथाभावी भन्न थाले भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? ओली यतिखेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन विभिन्न हतकण्डा अपनाउन लागिपरेका छन् ।
यसले भोलि उनैलाई घाटा पुर्‍याउनेमा द्विविधा छैन । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओली र अन्य आक्रामक शैलीमा अरूलाई गाली गर्दै आफ्नो प्रचारप्रसारमा लागेका नेताले अलिक शालीन भई निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।